Matthijs de Ligt Oo Si Dhab Ah U Diiday Dalabkii Barcelona Iyo Sababta Dhabta Ah Oo La Shaaciyay. - Gool24.Net
Matthijs de Ligt Oo Si Dhab Ah U Diiday Dalabkii Barcelona Iyo Sababta Dhabta Ah Oo La Shaaciyay.
Kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa si dhab ah u diiday dalabkii uga yimid kooxda Barcelona waxaana hadda shaaca laga qaaday sababta dhabta ah ee uu da’yarkan u diiday kooxda Barca.
Idaacada dalka Spain ee Cadena SER ayaa shaaca ka qaaday in De Ligt uu si rasmi ah u diiday dalabkii kooxda Barcelona inkasta oo ay maamulada kooxaha Barcelona iyo Ajax heshiis gaadheen.
Cadena SER ayaa lagu shaaciyay in wakiilka De Ligt ee Mino Raiola uu si rasmi ah u diiday dalabkii kaga yimid kooxda Barcelona isla markaana uu 19 sano jirkan reer Holland wakiilkiisa ku ixtiraamay go’aanka uu ku diiday dalabka Barcelona.
Waxaa sababta dhabta ah ee uu wakiilka De Ligt ee Mino Raiola uu ku diiday dalabkii kooxda Barcelona lagu sheegay in kooxaha PSG, Juventus iyo Manich ay dhamaantood soo bandhigeen dalabyo ka fiican kan ay Barcelona la shirtimid.
Wakiilka mayalka adag ee Mino Raiola oo la ogaa qaabkii uu waqti badan ay ugu qaadatay kooxaha Manchester United iyo Pual Pogba ee heshiiskii uu xidiga reer France ugu soo laabtay Old Trafford ayaa markale doonaya in kooxaha tartamayaa ay dalabyadooda sare u sii qaadaan.
Matthijs de Ligt ayaa hadda si rasmi ah u raacay go’aanka wakiilkiisa wuxuuna ku ixtiraamay diidmada dalabkii ay kooxaha Barcelona iyo Ajax ku heshiiyeen ee ahaa in De Ligt uu Camp Nou ku soo biiro.
Laakiin meesha lagama saarin in Barcelona ay dalabkeeda sare u soo qaadi karto iyo haddii ay gabi ahaanba iskaga bixi doonto tartankii ay ugu jirtay Matthijs de Ligt.
Waxay hadda u muuqataa in kubbada dagaalka Matthijs de Ligt ay dhex taalo kooxaha PSG, Juventus iyo Bayern Munich iyada oo Barcelona haddii ay doonayso in ay tartanka ku sii jirto lagu qasbay in ay dalabkeeda sare u soo qaado.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda PSG ayaa ah kooxda dalabka ugu qaalisan ee mushaarka Matthijs de Ligt u soo bandhigtay inkasta oo kooxaha Juventus iyo Bayern Munich lagu sheegay kooxaha ku soo xiga.
Manchester United, Real Madrid iyo Liverpool ayaan liiskan lagu xusin inkasta oo ay hore ugu jireen tartanka Matthijs de Ligt waxayna hadda u muuqataa in kooxihii badnaa ee doonayay De ligt ay soo yaraanayaan.
Si kastaba ha ahaatee, wakiilka Matthijs de Ligt ee Mino Raiola ayaan waxa ugu fiican oo kaliya la raadinayn 19 sano jirka reer Holland balse waxa uu u dagaalamayaa kooxda uu dilaalka ugu badan ka heli karo si uu heshiiska xidigan u dhamaystiri karo.